Musharrax u taagan xilka madaxweynaha Gobollada Dhexe oo lagu soo dhaweeyey Dhuusamareeb – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Musharrax u taagan xilka madaxweynaha Gobollada Dhexe oo lagu soo dhaweeyey Dhuusamareeb
18th January 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Munaasabad lagu soo dhaweynayay, isla markaana lagu taageerayay Maxamed Cilmi Afrax Mideeye oo ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimadda goboladda dhexe ee dalka gaar ahaan Mudug iyo Galgaduud ayaa maanta lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud.
Xafladda oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka Degmada ayaa waxaa ka qeyb galay Siihayaha Wasiir kuxigeenka Arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Mahad Maxamed Salaad, Guddoomiyaha Gobolka Galgaduud, Xuseen Cali Wehliye Cirfo, salaadiin, odoyaal dhaqameed, qeybaha bulshada iyo marti sharaf kale oo kulanka lagu casuumay.
Guddoomiyaha Degmada Dhuusamareeb, Cabdiraxmaan Geedo-qorow oo kulanka soo dhaweynta ah hadal ka jeediyay ayaa sheegay inay aad ugu faraxsanyihiin kulanka soo dhaweynta ah ay u sameeyeen musharax Maxamed Cilmi Afrax Mideeye, ayna sii wadayaan taageerada ay u hayaan musharaxan.
Qaar ka mid ah odoyaasha dhaqanka oo goobta hadal ka jeediyay ayaa shacabka ka codsaday inay codkooda ku taageeraan musharaxan u taagan qabashada xilka Madaxtinimo ee maamulka Gobollada dhexe ee dalka.
Axmed Diiriye Maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta la socda Musharaxa ayaa tilmaamay in Maxamed Cilmi Afrax uu yahay shaqsi wax badan u qabtay bulshada ku dhaqan gobollada dhexe, isagoo waxgaradka ka codsaday inay sii xoojiyaan taageerada ay iminka u hayaan.
Ugaas Xasan Ugaas Maxamed oo ka mid ah Ugaasyada gobolka galgaduud ayaa xusay in dhankooda ay hiil iyo hooba la diyaar yihiin musharaxan, waxaana tilmaamay in ay ka shaqeyn doonaan sidii taageerada loo kordhin lahaa.
Guddoomiyaha Gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wehliye Cirfo ayaa hoosta ka xariiqay in maamulkiisu uu diyaar u yahay soo dhaweynta musharixiinta u taagan qabashada Xilka Madaxtinimada ee Maamulka Gobollada Dhexe.
Maxamed Cilmi Afrax “Mideeye” oo ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada goboladda dhexe ayaa sheegay in muddo 23 sano ah uu ka shaqeynayay gobollada dhexe ee dalka, isagoo madax ka ah hay’adda, isla markaana uu iminka diyaar u yahay haddii uu ku guuleysto xilka uu u tartamayo inay soo kordhiyo wax u qabashada bulshada ku nool Gobollada Mudug iyo Galgaduud.
Munaasabadda ayaa intii ay socotay waxaa lagu soo bandhigay cayaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo suugaan ka hadlaysa horumarka Gobolka.
Musharraxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka Mudug iyo Galgaduud ayaa sii kordhaya iyadoo ay horay isu soo taageen ilaa 4 musharax oo kale.
Wadaad horay fanka uga baxay oo ka hadlay geeridii Maxamed Axmed Kuluc
Dagaalka Boko Haram oo u gudbay dalka Nigeria deriska ah la ah ee Cameron